Huawei Mate 30 Pro EMUI 10 मा नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ Androidsis
Huawei Mate 30 Pro EMUI 10 मा नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ
El हुआवेई मेट 30 प्रो तपाइँको नयाँ र उत्तम संस्करणको स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ EMUI 10. यो Huawei द्वारा नै घोषणा गरिएको छ, एक प्रोमोशनल पोस्टरको साथ।
हो वास्तवमा। अहिलेको लागी अपडेट केवल चिनियाँ इलाकामा फैलदैछ। अझै, चिनियाँ निर्माताले उच्च बजारका लागि अन्य बजारमा प्रस्ताव गर्ने समयको कुरा मात्र हो।
EMUI 10.0.0.195 यो नयाँ फर्मवेयर प्याकेज हो जुन हामी अब कुरा गर्दैछौं। यो सानो OTA को रूपमा आउँछ जुन आकारमा 600००MB (590 XNUMX ०MB, सटीक हुन) छ। साथै, यो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यहरू र सुविधाहरूसँग लोड गरिएको छैन। यद्यपि यसले स्मार्टफोनको बिभिन्न सेक्सनहरू अप्टिमाइज गर्दछ र केही फिक्सहरू थप गर्दछ, तपाईं तल ચેन्जलग देख्न सक्नुहुनेछ:
1 EMUI १०.०.०.१.१ 10.0.0.195 the मा Huawei मेट Pro० प्रो को लागि प्रदान गर्दछ?
EMUI १०.०.०.१.१ 10.0.0.195 the मा Huawei मेट Pro० प्रो को लागि प्रदान गर्दछ?
भर्चुअल क्यामेरा कुञ्जी स्थिति शुटि according अनुसार समायोजित गर्न सकिन्छ, र लचिलो ड्र्यागिंग बायाँ र दायाँपट्टि समर्थित छ।
केहि परिदृश्यहरूमा ब्लुटुथ जडान अनुभव अनुकूलन र ब्लुटुथ र उपकरण बीचको कनेक्शन को स्थिरता सुधार।
खेलमा केहि दृश्यहरूको टच स्क्रिन अपरेटिंग अनुभव उनीहरूको टच स्क्रिन अपरेसन सहज बनाउनको लागि अनुकूलित गरिएको छ।
सामान्य: हामी सिफारिस गर्छौं कि सम्बन्धित स्मार्टफोनलाई स्थिर र उच्च-गतिको वाइफाइ नेटवर्कमा डाउनलोड गर्न को लागी नयाँ फर्मवेयर प्याकेज स्थापना गर्न को लागी, प्रदायकको डाटा प्याकेजको अनावश्यक खपतबाट जोगिनको लागि। स्थापना प्रक्रियामा कुनै पनि असुविधा हुनबाट जोगिन राम्रो ब्याट्री स्तर हुनु पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।
Huawei Mate 12 लाईनको १२ मिलियन वितरण गर्दछ
अपडेट Huawei Mate 30 Pro को लागि केहि दिन वा हप्ताहरूमा विश्वव्यापी रूपमा रोल आउट हुन सक्छ। नोट गर्नुहोस् कि यो सामान्य छ। कम्पनीहरूलाई नयाँ फोन ओटीएहरू बिस्तारै उनीहरूको फोनबाट बिस्तारको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो सुनिश्चित गर्न को लागी सबै चीज सकेसम्म सफा र कुनै त्रुटि बिना नै गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » Huawei Mate 30 Pro EMUI 10 मा नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ
एन्ड्रोइड १० अपडेट LG G10 ThinQ का लागि विस्तार गर्दछ
प्रयोग भएको स्मार्टफोन बजार २०१ 206 मा २० 2019 मिलियन युनिट भन्दा बढि थियो र बढ्न जारी रहनेछ